Warbixinta Pantone: Dayrta / Jiilaalka 2015/2016 Hooska | Abuurista khadka tooska ah
Fran Marin | | Design Graphic, Waraaqaha midabaynta
Pantone ayaa daabacay warbixinta koromada iyo midabada ugu guulaha badan xilligan sida ay sheegeen guddiga naqshadeeyayaasha iyo xirfadleyda adduunka sawirka. Deyrtan (ama halkii jiilaalka), waxaa lagu garnaan doonaa adeegsiga beddelaadyo iyo daahyo muujiya dabeecadaha ugu dabiiciga ah, dheddigga iyo qoto dheer.
Xulitaankan cusub, maamuusyo badan ayaa loo sameeyaa dhacdooyinka taariikhiga ah ee Mareykanka sida 20-yadii heer sare, xilligii hippie-ka ee dib loo dhigay iyo sannadihii bohemian ee lixdamaadkii iyo toddobaatameeyadii oo ay ka buuxaan xalalka ugu jilicsan ee gudbinaya xasilloonida iyo xasiloonida. Waa palette oo aan lahayn jihayn qeexan waxa ay tahay unisex (Dhammaan xalalka waxaa lagula talinayaa ragga iyo dumarka labadaba).
Caqliga Saxaraha # A3AC99
Waa cod dhexdhexaad ah oo u dhexeeya cagaarka iyo cawlka. Waa xilli dayr ah oo ku habboon in lagu daboolo aagagga waaweyn maadaama aysan ahayn wax culeys badan oo aan si fudud loo ogaan. Waxay si toos ah ugu tilmaamaysaa dabeecadda qaab toos ah, oo si wanaagsan loogu muujiyey fikrad lagu kalsoonaan karo oo si fiican ugu xididaysan shamiinka. Isla mar ahaantaana waa mid aad u awood badan oo si fiican u shaqeeya iyada oo aan loo baahnayn in lagu xoojiyo codadka kale. Cimilada Stormy Weather, Oak Buff iyo Dhir Dhir ah ayaa si aad ah isugu dhafan ikhtiyaarkan iyo codad badan oo retro ah oo lagu daro Cadmium Orange iyo Cashmere Rose ayaa badanaa la isticmaalaa.
Cimilo duufaan # 58646D
Waa cirro buluug ah oo si xoog leh u iftiimaya isla markaana haysa xusuusta dabiiciga ah maxaa yeelay waxay aad ugu eg tahay midabka cirka daruuraha leh. Waxay bixisaa nabadgelyo maskaxeed waxaana sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu matalo fikradaha sida tayada ama raaxada. Waa mid aad u badan oo lagu dari karo tiro badan oo xulashooyin ah oo ku yaal palette.
Nooc ka mid ah qoyska huruudda ah oo aad u diiran oo xusuusiya qorraxda waaberi. Waxay leedahay astaamo qiiro leh oo qumman waxaana lagu dari karaa hab laxan ah oo leh 'Desert Sage' ama 'Stormy Weather', gaar ahaan haddii aad rabto inaad abuurto isku-darka koromatikada oo u janjeedha deyrta.
Geedo Qalalan # 847F5D
Waxay bixisaa xarrago iyo nusuusta casriga ah. Waa cagaar saytuun ah sidaa darteed sidoo kale waxaa ku jira waxyaabo dabiici ah oo dabiici ah. Waa wax aad u dabiici ah oo ka sarreeya dhammaan xulashooyinka dabiiciga ah ee loo adeegsan karo aagagga waaweyn waxayna noqon kartaa xalka ugu habboon haddii aan dooneyno inaan abuurno is-waafajinno iswaafajin ah. Waxaad ku samayn kartaa isku-dhaf aad u xiiso badan xulashooyinka sida Marsala, Stormy Weathe ama Biscay Bay.
Waa kan ugu guusha badan sanadka 2015. Waa beddel diiran oo ku dhow wax walba. Midab bunni ah oo u janjeera casaan sidoo kalena si ballaaran loogu adeegsan karo abuurista isku-dhafka xilliga dayrta. Wuxuu si aad ah isugu daraa waxyaabaha kale sida Madow & Caddaan iyo kaladuwanaanta buluugga ah ee ka muuqda soo jeedimaha guga-xagaaga 2015 iyo deyrta-jiilaalka 2015-2016. Waxaa sidoo kale lagu dari karaa si aad u wanaagsan buluug madow ama qoto dheer sida Reflecting Pond. Shaki la'aan, ikhtiyaar aad ufiican oo ay ugu wacan tahay qayb diiran oo saaxiibtinimo leh.
Waa barta dhexe ee u dhaxeysa cagaarka iyo buluugga taas oo ka sareysa dhammaan xasilloonida iyo ugubnaanta. Waa cod ka sarreeyaa dhammaantiis cusub oo aan culeys lahayn. Sidoo kale waa kuleyl iyo ka mid ah isku dhafka waxaan ka dooran karnaa ficil kasta oo midab ah palette-keena.
Cadmium Liinta # F5926C
Waa xalka liinta ee ku dhex jira paletkeena nooc ka mid ah nusqaanta lixdamaadkii. Rajo-abuur, hal-abuur iyo madadaalo ayaa ku jira doorashadan iyada oo aan loo huraynin xarrago. Waa raaxo leh oo u dhow laakiin aan dagaal lahayn sidaa darteed keligaa ayaa loo isticmaali karaa, in kastoo loo isticmaali karo noocyo kala duwan oo badan oo kala duwan si loo bixiyo is-beddello xiiso leh. Tusaale ahaan midabka Cashmere Rose.
Beddel aad u jilicsan oo casaan ah oo kiciya qaabka ugu dambeeya ee retro iyo isla markaa isbeddellada ugu hadda jira. Waa noole, qancin iyo isbeddel. Waa wax xoog badan sidaa darteed waa loo isticmaali karaa kaligiis, in kasta oo natiijooyin xiiso leh sidoo kale lagu heli karo iyadoo la isku daro Cadmium Orange, Desert Sage ama Marsala.
Milicsiga balliga # 32334
Waa bulug qabow oo aad u cufan oo si qoto dheer u siinaya xulashada jiilaalkaan. Waxay bixisaa nabadgelyo, degganaan iyo qabow. Waxaa si wanaagsan loogu dari karaa madow ama hooska sida Marsala, Stormy Weather ama Amethyst Orchid (kan ugu dambeeya wuxuu ku habboon yahay xalalka sheekooyinka badan).
Sababtoo ah waa midab dhif iyo naadir ah oo ku jira dabeecadda, midabka midabkiisu midabkiisu leeyahay saamayn qarsoon iyo mid ruuxi ah. Waa wax qarsoodi ah, dheddig ah oo xiriir dhow leh. Si fudud ayaa loo isticmaali karaa kaligiis in kasta oo sidoo kale lagu talinayo in lagu daro walxo madow ama midabbo sida Reflecting Pong iyo Marsala. Haddii waxa aan raadineyno ay yihiin saameyn dib u dhac ah waxaan sidoo kale ku qasan karnaa midabada liinta iyo casaanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Warbixinta Pantone: Dayrta / Jiilaalka 2015/2016 Hooska